Ndị a bụ egwuregwu ọhụrụ kacha mma gam akporo - Izu 22 February | Gam akporosis
Egwuregwu ọhụrụ na nke kachasị mma nke izu nke February 22 na gam akporo
Anyị abịaghachi ọzọ izu a na kacha mma na egwuregwu ọhụrụ maka gam akporo malitere ụbọchị ndị a gara aga ma na-achọ ịkwụsị. Anyị enweela mgbakwunye dị ebube dịka Warmmer dabeere na MMORPG, na ọtụtụ ndị ọzọ ga-enye anyị izu na izu izu ọchị.
Anyị na-aga nke a na egwuregwu ndị a ị na-ekwesịghị ịhapụ Na na dabere na genre ha ga-amalite oge awa na awa nke egwu.
1 Agha Stick 2: Agha nke Leggha 3
2 Kpọkọta egwuregwu
4 Doodle dash
5 Mkpokọta Eggscape
6 Golf Nsogbu
7 arcade 2
8 Alchemy ulo mkporo 2
Agha Stick 2: Agha nke Leggha 3
Un egwuregwu nke anyị ga-emeziwanye ndị agha anyị, jikọta ha ma debe ha n'ọgụ ka anyị wee malite mgbe anyị bidoro lekọta ọgụ. Egwuregwu dị mfe dị mfe n'echiche, nke nwere ike ịpụta maka akụrụngwa ya, ọ bụ ezie na ịgwa eziokwu ahụ, ọ bụghị otu n'ime ihe kachasị mma anyị hụrụla na AI ma ọ bụ ọgụgụ isi adịghị esiri ike iti.
Ihe niile ihe mgbagwoju anya 3D nke nwere ike itinye aka na agba kacha ese na nke ahụ ejiri mara anyi ike ka anyi choo onu ogugu ndị anyị hụrụ n'akụkụ aka ekpe. Egwuregwu mara mma nke na anyị na-aga n'ihu na-etinye onwe ya na nsogbu siri ike na ọnụ ọgụgụ dị mgbagwoju anya ka ihe niile wee bụrụ ihe na-eri ahụ ma dị mgbagwoju anya.
Site na otu anyi si eme ihe ojoo MMO, Warhammer Oddisey agaghi adi nfe karie, ebe obu na anyi na ulo akwukwo ochie MMORPG ebe agha na agha adighi na nke ị ga-aga ọrụ ahụ n'onwe gị. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị ahụ ejirilarị jikọtara na nkeji wee mee ihe ọ bụla, ị ga-aga nke ọzọ, ebe a anyị laghachiri n’ihe egwuregwu ndị a dịbu. N'ezie, na ọkwa dị elu ọ dị elu, buru oke ibu, ọtụtụ ebumnuche, ngwa ọgụ, nka na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe njem na backstory na otu n'ime ndị na-adịghị agwụ agwụ agba ọsọ nyiwe nke ahụ nwere mmetụ mara mma enwe ọmarịcha eserese site na iji aka dọta. Anyị nwere ụfọdụ nke physics ya na nkọwa ya dị ka mgbe onye na-akwado anyị ga-apụ n'anya mgbe ọ na-emetụ ọkụ ma ọ bụ gburugburu ebe ahụ ma ọ bụ oge ndị ahụ dị iche iche dị ka mgbe anyị na-ebu ski. Egwuregwu dị iche nke na-enyefe onwe ya n'ụdị ụdị ahụmịhe ndị ọzọ sitere na mkpanaka.
Crescent Moon Games na-ewetara anyị ezigbo arcade ọzọ nkịtị nke anyị kwesịrị ịkpali anyị ọkụkọ, mgbe ọ na-ịtụkwasị àkwá n’elu nke ọzọ ka ọ gafere larịị. Egwuregwu nwere ọtụtụ pikselụ retro na nke etinyere n’usoro. Fun na-enweghị obi abụọ ọ bụla na n'efu.
Developer: Egwuregwu Cross Criss
Ọ bụghị otu n'ime egwuregwu ọhụrụ nke izu, mana na-echekwa ọtụtụ nde nbudata, ma na-egwuri egwu ya na ogo nke ihe dị adị nke mere ụdị ala dị iche iche nwere mmetụta na trajectory nke igbu ahụ, anyị ahụla ịkwado ya. N'ezie, ọ ka edobeghị anya ma egwuregwu ha ọ dị n'oge ma ọ bụ vidiyo ha gosiri anyị ...
Uno otu n'ime ndị kacha mma égbè anyị na-egwuri n'oge na-adịbeghị anya na ọkwa Archero nke ọganihu na talent, ọtụtụ ndị iro dị iche iche nwere ndị isi ha ma ọ bụ asteroids na-achọ ịkwụsị oghere anyị na mbara igwe, na ọtụtụ ị kpọghee.
Alchemy ulo mkporo 2
Un roguelike puzzle nke ukwuu na nke mbụ nke anyị kwesịrị ịchọpụta Ezi ntụziaka na ijikọta ngwa agha, ite na ihe ndị ọzọ, ihu ọkpụkpụ ndị ahụ niile, goblins na ndị iro site na ụlọ mkpọrọ dị ka okporo ụzọ 5 × 6. Egwuregwu dị mgbagwoju anya karịa ka ọ nwere ike iyi na mbụ yana na anyị na-akwado gị ka ị were obere oge iji ghọta ya, ebe ọ bụ na mgbe ahụ ị ga-ahụ ya n'anya dịka nke gara aga.
Alchemy ulo mkporo
Developer: 717 pikselụ
Ndị a bụ egwuregwu ọhụrụ kacha mma gam akporo nke izu a anyị na-akpọ gị òkù ịmara ndị nke izu gara aga, dị ka nke February 15 y Ogbe 8.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu ọhụrụ na nke kachasị mma nke izu nke February 22 na gam akporo
A mara ọkwa Huawei P40 4G na-enweghị 5G modem yana na mbelata ego